ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ကလေးတှေ ဘာတှေ သိဖို့လိုသလဲ? - Chit MayMay
Home Parent Guide ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ကလေးတှေ ဘာတှေ သိဖို့လိုသလဲ?
မိဘတဈယောကျဖွဈလာပွီဆိုရငျ ကလေးရဲ့ အနာဂတျက မိဘတှပေျေါမှာ မူတညျလာပါပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိဘတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ သားသားမီးမီးတှကေို ဘယျအရှယျမှာ ဘယျလိုအကွောငျးအရာလေးတှေ သငျပေးရမယျ၊ ဘယျအရှယျမှာ ဘာတှသေိထားသငျ့တယျဆိုတာ လလေ့ာထားဖို့လိုပါတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာနှငျ့ပတျသတျပွီး သငျကွားပေးတဲ့အခါမှာ ကလေးတှကေို စိတျရှညျသညျးခံတတျအောငျ၊ အကောငျးမွငျစိတျမှေးတတျအောငျ စသဖွငျ့ သငျကွားပေးဖို့ လိုသလို စဈမှနျတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအကွောငျးတှလေညျး သငျထားပေးရပါမယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှကေို သငျပေးထားသငျ့တဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ ပတျသတျသော မကျဆခြေျ့တဈခြို့ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ မတျောမတရားလုပျတာက ခဈြခွငျးမတ်ေတာ မဟုတျပါဘူး
တခွားကလေးတှကေ နောကျပွောငျကြီစယျလိုကျလို့ ငိုပွီးအိမျပွနျလာတဲ့ သားသားမီးမီးတှကေို အဲ့ဒီကလေးက သူတို့အပျေါမှာ ကွိုကျနလေို့ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျမြိုး မပွောရပါဘူး။ တခြို့မမေတှေေ ရှိပါတယျ။ တခွားကလေးက ကိုယျ့ကလေးကို ငိုအောငျ စနောကျလိုကျတာမြိုး၊ အသားနာအောငျလုပျတာမြိုးဆိုရငျ “သားကိုခဈြလို့ စတာနမှောပါ၊ သမီးကို ခဈြလို့စတာနမှောပါ”လို့ အလှယျ ပွောလိုကျကွပါတယျ။ ဒီစကားလုံးက မတျောမတရားလုပျတာဟာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာရဲ့ သင်ျကတေတဈခုဖွဈတယျလို့ သူတို့ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ခဈြလို့နောကျပွောငျတာနဲ့ အနိုငျကငျြ့တာကို ကှဲပွားအောငျ သငျပေးရပါမယျ။
၂။ မတ်ေတာမှာ အပေးအယူရှိပါတယျ
သငျ့ရဲ့ အခဈြတှေ၊ ဂရုစိုကျမှုတှေ အားလုံးကို သားသမီးပျေါ ပုံပေးဖို့၊ ကိုယျ့ကလေးပျေါမှာ တုနျနအေောငျ ခဈြဖို့ဆိုတာ လှယျကူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးတှေ အရှယျရောကျလို့ အိမျထောငျရကျသားကလြာတဲ့အခါ မိဘအပျေါ ပွနျပွီး ဂရုစိုကျဖို့၊ ခဈြဖို့ဆိုတာ ခကျခဲလာပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး စုနျရသောရှိတယျ၊ ဆနျရမေရှိဘူးလို့ ပွောကွတာပါနျော။ မိဘတှေ သူတို့အပျေါခဈြသလို မိဘအပျေါ ပွနျခဈြရမယျဆိုတာ သူတို့ သိထားသငျ့ပါတယျ။ တခွားသူတှဆေီက ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ခံထိုကျသလို တခွားသူတှကေို ခဈြခွငျးမတ်ေတာပေးပွီး အပေးအယူရှိဖို့ကို သှနျသငျပေးရပါမယျ။
၃။ တခွားသူတှကေို ခဈြတာဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို နညျးနညျးပဲ ခဈြရမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး
မမေတေို့ ကလေးဟာ သူတို့တဈယောကျယောကျကို ခဈြတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို စှနျ့လှတျ အနဈနာခံသငျ့တယျလို့ မဆိုလိုကွောငျး သိဖို့လိုပါတယျ။ အပေးအယူဆိုတာ ဘယျ relationship မဆိုအရေးပါပမေယျ့ တခွားတဈယောကျကို ခဈြနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကို အခဈြမလြော့သငျ့ပါဘူး။ ကိုယျ့ဘဝထကျ မငျးကို ပိုခဈြတာတို့၊ ကိုယျ့ဘဝတဈခုလုံး ပေးဆပျပွီး ခဈြတာတို့ဆိုတာ တကယျတော့ လကျတှမှေ့ာ မကောငျးပါဘူးနျော။ ကလေးတှကေ မိဘတှရေဲ့ relationship ကိုကွညျ့ပွီး သငျယူကွပါတယျ။
၄။ လေးစားမှုက ခဈြခွငျးမတ်ေတာမှာ သိပျအရေးကွီးပါတယျ
လေးစားမှုနှငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာက ဒှနျတှဲနသေငျ့ကွောငျး ကလေးတှေ သိထားသငျ့ပါတယျ။ တခွားသူတှဆေီကနေ လေးစားမှု ရယူသငျ့ပွီး တခွားဘယျသူ့ကိုမဆို လေးစားမှု ပွနျပေးရမယျ ဆိုတာ သငျပေးရပါမယျ။ လေးစားမှုမရှိတဲ့ အခဈြက အဆိပျအတောကျ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
၅။ ကိုယျ့ကိုယျကို ခဈြခွငျးက အရေးအပါဆုံးအခဈြမြိုး ဖွဈပါတယျ
တဈကိုယျကောငျးဆနျတာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ခဈြတယျဆိုတဲ့ ခွားနားခကျြကို ကလေးတှေ သိဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျကြိုးအတှကျ တခွားသူတှကေို ခမြနငျးရဘူးဆိုတာ သှနျသငျပေးသငျ့ပါတယျ။ တဈယောကျယောကျကို ခဈြဖို့ fit ဖွဈအောငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ပုံစံခှကျထဲသို့ မပွောငျးလဲသငျ့ဘူးဆိုတာလညျး သိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၆။ တခါတရံမှာ အခဈြက ထာဝရမမွဲနိုငျပါဘူး
အရှယျရောကျလာတဲ့ မမေတေို့ကလေးဟာ ရိုမနျ့တဈအခဈြဇာတျလမျးတှကေိုကွညျ့ပွီး အခဈြက တဈသကျတာလုံး ကွာရှညျခံမယျလို့ ယုံသှားနိုငျပါတယျ။ အမှနျတရားမှာ အခဈြက ခဏတဈဖွုတျသာဖွဈပွီး တခါတရံမှာ အကြိုးမရှိနိုငျတဲ့ relationship တဈခုကို အဆုံးသတျလိုကျတာက ပိုကောငျးတယျဆိုတာ သိထားရပါမယျ။ သူတို့ဟာ အခဈြအတှကျနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အခြိနျတှေ အားလုံးကို မစှနျ့ပဈရဘူးဆိုတာ နားလညျဖို့ လိုပါတယျ။
၇။ ရရှေညျတညျတံ့တဲ့ အခဈြမှာ အားထုတျမှု လိုအပျပါတယျ
ခဈြခွငျးမတ်ေတာက ထိလှယျရှလှယျတာကွောငျ့ အခဈြမှာ အားထုတျမှု ထညျ့ဖို့ လိုအပျတယျဆိုတာ လူငယျတှေ လလေ့ာဖို့ လိုအပျပါတယျ။ တဈယောကျယောကျကို ခဈြပွီဆိုရငျ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှု၊ အလေးထားမှု၊ ပြျောရှငျမှု တှပေေးရမှာဖွဈပါတယျ။
၈။ တခါတရံမှာ သငျခဈြတဲ့သူက သငျ့ကိုပွနျမခဈြပါဘူး
မိဘတှအေနနေဲ့ သူတို့လိုခငျြတာတှေ၊ ဖွဈခငျြတာတှေ အရာရာတိုငျးပေးဖို့ အကောငျးဆုံးကွိုးစားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လိုခငျြတာ၊ ဖွဈခငျြတာတှေ အမွဲတမျးမရနိုငျဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယျ။ တဈဖကျသကျအခဈြက စိတျနှလုံးပူဆှေးတှေ ရနိုငျပမေယျ့ သူတို့သငျယူ လလေ့ာထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဘာတှကွေုံတှရေ့မလဲဆိုတာ၊ သူတို့သိပွီးသား၊ မြှျောလငျ့ပွီးသားဆိုရငျ စိတျထိခိုကျမှု နညျးစပေါလိမျ့မယျ။
၉။ ကိုယျ့ကို ပိုကောငျးတဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈစမေယျ့ အခဈြမြိုး ဖွဈရပါမယျ
အခဈြ အမြိုးအစားတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သူတို့ကို လူကောငျးတဈယောကျဖွဈစမေယျ ဘယျခဈြခွငျးမတ်ေတာမြိုးကို ခံထိုကျသလဲဆိုတာ မမေတေို့ ကလေးတှေ နားလညျရပါမယျ။ လူကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့၊ တောကျပတဲ့ အနာဂတျရှိသူဖွဈဖို့ သူတို့ကို အားပေးအားမွှောကျပွုပေးတဲ့ အခဈြမြိုး ဖွဈသငျ့တယျဆိုတာ သူတို့သိထားရပါမယျ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကလေးတွေ ဘာတွေ သိဖို့လိုသလဲ?
မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကလေးရဲ့ အနာဂတ်က မိဘတွေပေါ်မှာ မူတည်လာပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို ဘယ်အရွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေ သင်ပေးရမယ်၊ ဘယ်အရွယ်မှာ ဘာတွေသိထားသင့်တယ်ဆိုတာ လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာ ကလေးတွေကို စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်အောင်၊ အကောင်းမြင်စိတ်မွေးတတ်အောင် စသဖြင့် သင်ကြားပေးဖို့ လိုသလို စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းတွေလည်း သင်ထားပေးရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို သင်ပေးထားသင့်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သတ်သော မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ မတော်မတရားလုပ်တာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မဟုတ်ပါဘူး
တခြားကလေးတွေက နောက်ပြောင်ကျီစယ်လိုက်လို့ ငိုပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို အဲ့ဒီကလေးက သူတို့အပေါ်မှာ ကြိုက်နေလို့ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး မပြောရပါဘူး။ တချို့မေမေတွေ ရှိပါတယ်။ တခြားကလေးက ကိုယ့်ကလေးကို ငိုအောင် စနောက်လိုက်တာမျိုး၊ အသားနာအောင်လုပ်တာမျိုးဆိုရင် “သားကိုချစ်လို့ စတာနေမှာပါ၊ သမီးကို ချစ်လို့စတာနေမှာပါ”လို့ အလွယ် ပြောလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီစကားလုံးက မတော်မတရားလုပ်တာဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ချစ်လို့နောက်ပြောင်တာနဲ့ အနိုင်ကျင့်တာကို ကွဲပြားအောင် သင်ပေးရပါမယ်။
၂။ မေတ္တာမှာ အပေးအယူရှိပါတယ်
သင့်ရဲ့ အချစ်တွေ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေ အားလုံးကို သားသမီးပေါ် ပုံပေးဖို့၊ ကိုယ့်ကလေးပေါ်မှာ တုန်နေအောင် ချစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေ အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ မိဘအပေါ် ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်ဖို့၊ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း စုန်ရေသာရှိတယ်၊ ဆန်ရေမရှိဘူးလို့ ပြောကြတာပါနော်။ မိဘတွေ သူတို့အပေါ်ချစ်သလို မိဘအပေါ် ပြန်ချစ်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့ သိထားသင့်ပါတယ်။ တခြားသူတွေဆီက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံထိုက်သလို တခြားသူတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးပြီး အပေးအယူရှိဖို့ကို သွန်သင်ပေးရပါမယ်။
၃။ တခြားသူတွေကို ချစ်တာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နည်းနည်းပဲ ချစ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး
မေမေတို့ ကလေးဟာ သူတို့တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံသင့်တယ်လို့ မဆိုလိုကြောင်း သိဖို့လိုပါတယ်။ အပေးအယူဆိုတာ ဘယ် relationship မဆိုအရေးပါပေမယ့် တခြားတစ်ယောက်ကို ချစ်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်မလျော့သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘဝထက် မင်းကို ပိုချစ်တာတို့၊ ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ပြီး ချစ်တာတို့ဆိုတာ တကယ်တော့ လက်တွေ့မှာ မကောင်းပါဘူးနော်။ ကလေးတွေက မိဘတွေရဲ့ relationship ကိုကြည့်ပြီး သင်ယူကြပါတယ်။
၄။ လေးစားမှုက ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်
လေးစားမှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဒွန်တွဲနေသင့်ကြောင်း ကလေးတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ တခြားသူတွေဆီကနေ လေးစားမှု ရယူသင့်ပြီး တခြားဘယ်သူ့ကိုမဆို လေးစားမှု ပြန်ပေးရမယ် ဆိုတာ သင်ပေးရပါမယ်။ လေးစားမှုမရှိတဲ့ အချစ်က အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ခြင်းက အရေးအပါဆုံးအချစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခြားနားချက်ကို ကလေးတွေ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် တခြားသူတွေကို ချမနင်းရဘူးဆိုတာ သွန်သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ fit ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံစံခွက်ထဲသို့ မပြောင်းလဲသင့်ဘူးဆိုတာလည်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ တခါတရံမှာ အချစ်က ထာဝရမမြဲနိုင်ပါဘူး
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ မေမေတို့ကလေးဟာ ရိုမန့်တစ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့်ပြီး အချစ်က တစ်သက်တာလုံး ကြာရှည်ခံမယ်လို့ ယုံသွားနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တရားမှာ အချစ်က ခဏတစ်ဖြုတ်သာဖြစ်ပြီး တခါတရံမှာ အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့ relationship တစ်ခုကို အဆုံးသတ်လိုက်တာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။ သူတို့ဟာ အချစ်အတွက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေ အားလုံးကို မစွန့်ပစ်ရဘူးဆိုတာ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
၇။ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ အချစ်မှာ အားထုတ်မှု လိုအပ်ပါတယ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ထိလွယ်ရှလွယ်တာကြောင့် အချစ်မှာ အားထုတ်မှု ထည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ လူငယ်တွေ လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ပြီဆိုရင် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၊ အလေးထားမှု၊ ပျော်ရွင်မှု တွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ တခါတရံမှာ သင်ချစ်တဲ့သူက သင့်ကိုပြန်မချစ်ပါဘူး
မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့လိုချင်တာတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေ အရာရာတိုင်းပေးဖို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေ အမြဲတမ်းမရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ဖက်သက်အချစ်က စိတ်နှလုံးပူဆွေးတွေ ရနိုင်ပေမယ့် သူတို့သင်ယူ လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ၊ သူတို့သိပြီးသား၊ မျှော်လင့်ပြီးသားဆိုရင် စိတ်ထိခိုက်မှု နည်းစေပါလိမ့်မယ်။
၉။ ကိုယ့်ကို ပိုကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်စေမယ့် အချစ်မျိုး ဖြစ်ရပါမယ်
အချစ် အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ကို လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေမယ် ဘယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးကို ခံထိုက်သလဲဆိုတာ မေမေတို့ ကလေးတွေ နားလည်ရပါမယ်။ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့၊ တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ရှိသူဖြစ်ဖို့ သူတို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုပေးတဲ့ အချစ်မျိုး ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ သူတို့သိထားရပါမယ်။
Previous articleထိနျးမရ သိမျးမရတဲ့ ခပျဆိုးဆိုးကလေးတှဟော ဘာ့ကွောငျ့ အပြျောရှငျဆုံး ဖွဈရတာလဲ?
Next articleနို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ မိခငျနို့တိုကျကြှေးခွငျးအကွောငျး သိကောငျးစရာမြား